အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အောင်မြင်ချင်ရင် – Live the Dream
“အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်လည်းကွာ ငါတော့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အောင်မြင်ချင်တယ် ဒါမှ ကိုယ့်အောင်မြင်မှု အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားလို့ရမှာပေါ့” သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားစမြည်ပြောနေကြရင်း ကောက်ခါငင်ခါ ပြောလာတဲ့ သူ့စကားကြောင့် အတော်လေး အတွေးဝင်သွားမိတယ်။ အင်း… သူပြောတော့လည်း ဟုတ်နေသလိုလို… အောင်မြင်သူတွေကို ပြပါ ဆိုရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထွန်းပေါက်အောင်မြင်ကြသူတွေ ရှိပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းအရ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အသက်ကြီးပိုင်းမှ အောင်မြင်မှု အတည်တကျ ရကြတာ ပိုများတယ် မဟုတ်လား။ ဘီလျံနာတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ငယ်ရွယ်သူတွေ နည်းပါးတယ်လေ။ ဒါဆိုရင် လူငယ်တွေကရော…? အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အောင်မြင်ချင်တဲ့ သူတွေကျတော့ရော…?
တကယ်တမ်း နည်းလမ်း မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးသိကြတဲ့ Facebook တည်ထောင်သူကြီး Mark Zuckerberg ဟာလည်း ငယ်ရွယ်တဲ့ အောင်မြင်သူတွေထဲ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို ငယ်ရွယ်ပေမယ့် ထွန်းပေါက် အောင်မြင်ပြီး ရှေ့ဆက်ကြိုးစားနေကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်လေးတွေ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အောင်မြင်မှု ရနိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်လေးတွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အောင်မြင်မှု လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုက ဘာလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အတွက် အောင်မြင်မှုက ဘာမှန်း နားမလည်ရင် ကိုယ်ဘာအတွက်များ ရှေ့ဆက်နေတာလဲ… ကြိုးစားနေတာလဲ။ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်နိုင်မှ ဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့၊ ဒီအောင်မြင်မှုကို အရယူဖို့ ဘယ်လမ်း ကနေ သွားရမလဲ၊ ဘာတွေဖြည့်တင်းရမလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ သုံးရမလဲ စတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး ကိုယ့်အတွက် အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ၊ ကိုယ်ဘာလိုချင် တာလဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ၊ ဘယ်အနေအထားထိ ရောက်ချင်တာလဲ ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရှင်းလင်းသေချာအောင် အရင်လုပ်ပါနော်။
အောင်မြင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်က အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကျောင်းတုန်းက စာတော်တဲ့ အဖွဲ့၊ စာညံ့တဲ့အဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်အဖွဲ့၊ အဆိုးအပေအဖွဲ့ ဆိုပြီး တူရာစုတတ်ကြသလို ကိုယ်ဟာလည်း အောင်မြင်ချင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တစ်နေကုန် စားဖို့ အိပ်ဖို့ လောက်ပဲသိပြီး ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် ဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ ပိတ်မိနေရင်တော့ ဘာဗဟုသုတ၊ တိုးတက်မှုမှ ရှိမှာမဟုတ်သလို ကိုယ်ပါ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ အလားအလာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အားကျရတဲ့သူတွေ၊ ရည်မှန်းချက် တူကြသူတွေ၊ ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေ စတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝန်းရံဖို့ သတိရစေချင်ပါတယ်။
အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကြံပေးစကားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အလုပ်တစ်ခုကို အဆုံးထိ ဇောက်ချလုပ်ဖို့ တော်တော် များများ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံး သိကြပေမယ့်လည်း ခုခေတ်လူငယ်တွေ ဆိုသည်မှာ ပေါ်ပင်လိုက်မိတတ်တာ အရမ်းများပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဟိုဟာလေး ကောင်းနိုးနိုး၊ ဒီဟာလေးကို အတည်လုပ်တော့မလိုလိုနဲ့ ဘာရယ်သေချာ ဖြစ်မလာဘဲ တစ်ခုခုမှာ လုံးဝကျွမ်းကျင်တယ်၊ အောင်မြင်တယ် ဆိုတာမျိုး မရှိနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ ဆိုတော့ ပေါ်ပင်မလိုက်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကိုယ်ဟာ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ အရာကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆီ အနှေးနဲ့ အမြန် နီးစပ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။
ပညာရည်ပြည့်ဝဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘွဲ့အထပ်ထပ်နဲ့ လက်မှတ်အစုံစုံကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်တဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ နက်နဲတဲ့ နားလည်မှု၊ လေ့လာမှုကို ဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကနေ ကျွန်တော်တို့ကို အရာအားလုံး မသင်ကြားပေးနိုင်တာမို့ ပြင်ပ အထွေထွေ ဗဟုသုတဆိုတာ မဖြစ်မနေ လေ့လာထားသင့်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကနေ ပန်းတိုင်တစ်ခု သတ်မှတ်ထား ပြီးရင် အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် သိထားသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ လေ့လာထားရမယ့် အရာတွေ၊ သင်ယူရမယ့် အရာတွေ၊ ဖြည့်တင်းရမယ့် ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်နိုင်မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အရည်အချင်းတစ်ခု ထွက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅. Review လုပ်ဖို့လိုတယ်
Review မလုပ်ဘဲ ရှေ့ဆက်နေသူတစ်ယောက်က မြေပုံမပါဘဲ ရောက်တက်ရာရာ သွားနေသူနဲ့ တူပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိရတော့ဘူး၊ လမ်းမှားနေလား မသိရတော့ဘူး၊ ဘယ်လမ်းကနေ ဆက်သွားရမလဲ သိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Review လုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Review မှန်မှန် လုပ်ပေးရင် ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ကို မမေ့တော့ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ ပြုပြင်ရမယ့် အချက်တွေ မြင်လာမယ်၊ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက်နေသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် တစ်ချက် အရေးကြီးတာက Review လုပ်ပြီး ပြုပြင်စရာတွေ၊ သင်ယူစရာတွေကို လက်တွေ့ ပြန်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါနော်။
အောင်မြင်မှုကို ငွေကြေးချမ်းသာမှုအပေါ် လုံးဝ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်က ပိုက်ဆံ ဖြစ်လာပြီး ကိုယ်ဟာလည်း လောဘနောက်လိုက်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးက အရေးကြီးတာ မှန်သလို လောဘလည်း ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို ငွေရဖို့၊ ချမ်းသာဖို့ဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကို လမ်းမှားရောက်စေသူ၊ ကိုယ့်ကျရှုံးမှုရဲ့ အရင်းအမြစ် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါထက် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက် ဖြည့်တင်းမှုအပေါ် အဓိက မှီတည်လေ့လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို အကျိုးပြုနိုင်မလဲ၊ လူတွေကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နော်။